2016 | ကမ်းလက်
in Politics, Singapore, ဇင်ဝေသော်, အမျိုးသားရေး - on 8/30/2016 - No comments
စင်္ကာပူရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ပြောရာမှာ အခြားအချက်တွေကိုပဲ ထပ်တလဲလဲ ပြောနေကြပေမဲ့ မှန်ပြီး ပြောရခက်တာရှိတယ်။
ဒါက မလေးရှားမှာ မလေးလူမျိုးအများစု၊ စင်္ကာပူမှာ တရုတ်လူမျိုးအများစု ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ ဒါကို တရုတ်တွေက ဖွင့်ပြောရင် လူမျိုးချင်း ရန်သတ်ဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။
မလေးရှားမှာ ကန့်သတ်၊ ဟန့်တားမှုမရှိဘဲ အများစု မလေးတွေက လူနည်းစု တရုတ်၊ ကုလားတွေထက်သာအောင် မလုပ်နိုင်ဘူး။ လူမျိုးကြီးရဲ့ ဦးဆောင်မှုစွမ်းရည် နိမ့်ပါးတယ်။ ကျေးလက်တွေမှာ ဆာရုန်းလို့ခေါ်တဲ့ ပုဆိုးကြီးတွေနဲ့ မနက်စာရှိရင် အေးအေးဆေးဆေး အိပ်ယာဝင်သူတွေအများကြီး။ ရောင့်ရဲတာလား၊ စိတ်ကူးစိတ်သမ်း မရှိတာလားပဲ။ မချမ်းသာချင်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။
စင်္ကာပူမှာရှိတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေက နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးနဲ့ လူမှုရေးတွေမှာ ကန့်သတ်ဟန့်တားမှုမရှိဘဲ လူနည်းစုတွေကို ဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်တယ်။
မလေးရှားမှာဆို လီကွမ်းယုလည်း ဒီလို ဇာတ်လမ်းမျိုး မရေးနိုင်ဘူး။ ဒါက သေချာတယ်။
တရုတ်တွေကြားမှာလည်း သဘောတူ၊ မတူကိစ္စတွေရှိတယ်။ လေ့လာ မိသလောက်ကတော့ တရုတ်အများစုက ဘယ်တော့မှ အလုပ်ပျက်ခံပြီး ငြင်းခုံမနေကြဘူး။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ အများစုရှိတဲ့လူမျိုးက ဦးဆောင်နေရာကို ရယူနိုင်ရင်၊ ဦးဆောင်စွမ်းရည်ရှိရင် တိုးတက်ဖို့ မြန်တာပါပဲ။
သူက အဓိက မောင်းနှင်အား၊ နေးရှင်းတစ်ခုရဲ့ ပင်မ ကာရိုက်တာ။
ဥပမာ။ အမေရိက၊ ဂျပန်၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ်၊ စင်္ကာပူ၊ ကိုရီးယား။
မလေးရှားကတော့ "ဘူမိပုတြ" ဝါဒနဲ့ မအောင်မြင်လှဘူး။
Labels: Politics, Singapore, ဇင်ဝေသော်, အမျိုးသားရေး
in NUS, Ven Cittara - on 8/30/2016 - No comments
NUS (National University of Singapore) ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ ပထမ ဆီမိနာ။ ဒီနေ့ ညနေ။ လူငယ်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လမ်းစဉ်အကြောင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြောမယ်
August 26 at 12:09pm
သမ္မတဟောင်း မစ္စတာ နသန်ရဲ့ဈာပနကြောင့် ကားလမ်းတွေပိတ်နေလို့ မနည်းချုပ်ပြောခဲ့ရတယ်။
(NUSBS Tea Talk)
August 26 at 9:09pm
NUS Buddhist Society ရဲ့ အကြံပေးတွေက ၂၀၀၈/၂၀၀၉ တုံးကဆိုရင် သူတို့တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရတွေချည်းပဲ။ အား ရှားပါး။
ကိုယ်တို့က ရွာကပါလာတဲ့ ပညာလေးနဲ့ မနည်းတိုးယူခဲ့ရတာ။ အခုတော့ မကြောက်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်လည်း ဆရာကြီးတန်းထဲ ဝင်နေပြီပဲဥစ္စာ။ အဟက်။
August 26 at 9:27pm ·
ဒီနေ့ အရှင်စက္ကပါလတို့ NUS (National University of Singapore) ကွင်းထဲ ပထမဆုံးအကြိမ် ခြေစစ်ပွဲ ဝင်ပါပြီ။
မလွယ်ပေမဲ့ နိုင်ငံခြားသားထဲ တည့်တည့်တိုးတာကို ပို စိတ်ဝင်စား၊ ပို အားပေးမိတယ်။
"Go on, move on. You can do it." ပေါ့လေ။
Mangala Vihara, Burmese tradition and NUS Buddhist Society.
ကျောင်းသားလေးတွေပေမဲ့ လေ့လာမှုအား မနည်းဘူး။ 'ကပ္ပိယ' ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို အမိအရ သုံးစွဲပြနိုင်တယ်။ စကားပြောရင် လဲတွေ လားတွေ လော်တွေနဲ့ပေမဲ့ စလုံးကလေးတွေကို လျှော့တွက်လို့ လုံးဝမရဘူး။
Labels: NUS, Ven Cittara
in Mr. China, Tim Clissold, စာအုပ်အညွှန်း, ဇင်ဝေသော်, မစ္စတာချိုင်းနား - on 8/30/2016 - No comments
(မျက်နှာဖုံးပေါ် တင်ထားတဲ့ဝါကျတွေကတော့ စာဟန်၊ စကားပြောဟန် ရောနေလေရဲ့ ဆျာကျော်ရေ။ အဟက်)
စာရေးဟန်နဲ့ တစ်အုပ်လုံး ပထမဆုံးရေးတဲ့ ဘာသာပြန်ပါ။
Labels: Mr. China, Tim Clissold, စာအုပ်အညွှန်း, ဇင်ဝေသော်, မစ္စတာချိုင်းနား
ပါးပါနပ်နပ် ကိုင်တွယ်နိုင်ရင် တရုတ်က အဆိုးကြီး မဟုတ်ပါဘူး
in Politics, ဇင်ဝေသော်, မစ္စတာချိုင်းနား - on 8/30/2016 - No comments
မစ္စတာချိုင်းနားကို ဘာသာပြန်ပြီးတဲ့နောက် တရုတ်ကို ထောက်ခံ/လက်ခံလာမိတယ်။ ပါးပါနပ်နပ် ကိုင်တွယ်နိုင်ရင် (တကယ်က မြန်မာကိုယ်တိုင်ကလည်း အားနည်းချက်တွေ အများကြီးပါ) တရုတ်က အဆိုးကြီး မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ပြီး သူက အာရှတန်ဖိုးကို ကြွေးကြော်မယ့် စူပါပါဝါလည်း ဖြစ်လာနေတယ်။ ဂျပန်ရှိပေမဲ့ ဂျပန်က တရုတ်နဲ့စာရင် ဝိတ်သေးတယ်။ ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ် စာချုပ်မချုပ်မိဖို့ပဲ။ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် စာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ (သူ့ထက်ယုံရမယ့်လူလည်း မြန်မာပြည်မှာမရှိဘူး) လက်ခုပ်တီးပါတယ်။
Labels: Politics, ဇင်ဝေသော်, မစ္စတာချိုင်းနား
in Mr. China, Tim Clissold, ဇင်ဝေသော်, မစ္စတာချိုင်းနား - on 8/30/2016 - No comments
ဒါနက် မေးခွန်းလေးတွေ ဖြည်းဖြည်းမေးကြဘာ ညော်။ မစ္စတာချိုင်းနား ၂ ခန်းကျန်နေလို့။ ကျော်က စာရေးမြန်ပေမဲ့ စာမျိုက်တတ်ပုစ်။ ခ်
Labels: Mr. China, Tim Clissold, ဇင်ဝေသော်, မစ္စတာချိုင်းနား
ဒီနေ့ မစ္စတာချိုင်းနား ဘာသာပြန်ကို အောင်မြင်စွာ အဆုံးသတ်လိုက်နိုင်ပါပြီ
ဒီနေ့ မစ္စတာချိုင်းနား ဘာသာပြန်ကို အောင်မြင်စွာ အဆုံးသတ်လိုက်နိုင်ပါပြီ။ ကမ္ဘာ့နိယာမပြီးရင် ထွက်လာဖို့ပါပဲ။
မူရင်းစာရေသူ တင် ကလစ်ဆိုးလ်ကတော့ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ရှုပြီး တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ ထင်သလောက် နားလည်ရ မခက်၊ ထင်သလောက် ကြောက်စရာ မကောင်း။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးနည်းတူ ချစ်စရာတွေပါပဲဆိုတာကို စာဖတ်သူတွေ သဘောပေါက်မိကြမယ်ဆိုရင် ဒီစာအုပ် ရေးရကျိုး နပ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
စာအုပ်တင်မကပါဘူး။ စားရေးသူ တင် ကိုယ်တိုင်ကလည်း အတော် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ တရုတ်စာ ရေးနိုင် ဖတ်နိုင် ပြောနိုင်။ ဘေဂျင်းတက္ကသိုလ်ထွက် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး။ ဘာသာရေးစကားနဲ့ဆို့ရင် တရုတ်သေလို့ ဝင်စားတဲ့ လူမျိုးပါ။
အရင်က ဝတ္ထုဘာသာပြန်ကို ခပ်လွယ်လွယ်ပါလို့ ထင်တားတဲ့ကောင်လေ
in Mr. China, ဇင်ဝေသော်, မစ္စတာချိုင်းနား - on 8/30/2016 - No comments
စာရေးရာမှာ ပင်ကိုယ်ရေးနဲ့ဘာသာပြန် မတူဘူး။ ကိုယ်တိုင်သိပြီးပြီ။
ဘာသာပြန်ရာမှာလည်း စာလေး၊ ကျမ်းကြီးတွေပြန်ရတာနဲ့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ ဝတ္ထု ကို ပြန်ရတာ မတူဘူး။
ကျမ်းကြီးမှာ ဘာသာရပ်နဲ့အဓိပ္ပါယ် တတ်နိုင်သမျှ နီးစပ်အောင် အားစိုက်ရပြီး ဝတ္ထုက ရသမပျက်အောင် ခံစားမှုပိုအားစိုက်ရတယ်။
ဘယ်ဟာမှ မလွယ်ဘူး။ အရင်က ဝတ္ထုဘာသာပြန်ကို ခပ်လွယ်လွယ်ပါလို့ ထင်တားတဲ့ကောင်လေ.....
ဆရာကြီးမြသန်းတင့်က မျက်မှန်များ ကျော်ကြည့်နေလေမလား။
Labels: Mr. China, ဇင်ဝေသော်, မစ္စတာချိုင်းနား
မစ္စတာချိုင်းနား - ဘာသာပြန်သူ၏ အမှာ
၁။ မစ္စတာချိုင်းနားကို ၂၀၀၆ ခုလောက်က Gina က 'ဖတ်ကြည့်ပါလား၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်တယ်' ဟု ညွှန်းသဖြင့် ဖတ်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုစဉ်ကတော့ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ကလည်း ဘာမှန်းမသိ၊ မိမိဆီမှာ ကိန်းနေပြီဖြစ်သည့် ဘာသာပြန်ပိုးကလည်း အခုလောက် မထသေးသဖြင့် ဘာသာပြန်ဖို့အထိ စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော် စီးပွားရေးတံခါးဖွင့်စ တရုတ်ပြည်၏ နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုရေး နောက်ခံပန်ချီးကားချပ်များကတော့ ထိုအချိန်ကတည်းက ကျွန်တော့်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
၂။ လီကွမ်းယု၏ လူတစ်ယောက်ရဲ့ကမ္ဘာ့အမြင် အဆုံးသတ်နေချိန် မစ္စတာချိုင်းနားအကြောင်း ကိုအံ့ထူးနိုင်နှင့် စကားစမိပြီး သူကပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဒီလိုမျိုးစာအုပ်မျိုးကိုလည်း ဘာသာပြန်သင့်တယ်ဟု အကြံပြုလာသည်။ သူပြောပြီးနောက် စဉ်းစားကြည့်မိတော့ 'အင်း သူပြောတာလည်း မဆိုးဘူး။ လေးလေးလံလံကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ တစ်စုံတစ်ရာတော့ စာဖတ်သူတွေ ရနိုင်ပါရဲ့' တွေးမိပြီး ဘာသာပြန်ခဲ့မိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၃။ မူရင်းစာရေးသူ Tim Clissold ကိုယ်တိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်မှုနှင့်ပြောရလျှင် တရုတ်သေလို့ ဝင်စားလေသလား ပြောရအောင်အောင် တရုတ်ပြည်မကြီးအပေါ် အနုသယ သံယောဇဉ်များ ရှိနေခဲ့သည်။ လူဖြူကျောင်းသား တစ်ယောက်မှမရှိသည့် ထိုခေတ်က ဘေဂျင်းတက္ကသိုလ်လိုနေရာကို သွားရောက်ပြီး တရုတ်စာသင်ယူခဲ့သည့် သူ၏နောက်ခံအကြောင်းတရားကလည်း ကျွန်တော့်အတွက် စိတ်ဝင်းစားမှု ပိုစေခဲ့ပါသည်။
၄။ အမှန်တကယ် ဘာသာပြန်ဖို့အထိ စိတ်ကူးပြီးနောက် ဒုတိယအကြိမ် ဖတ်မိစဉ်မှာတော့ တရုတ်ပြည်၏ စီးပွားရေးပွင့်လင်းစ ကမောက်ကမောက်ဖြစ်ရပ်များက တရုတ်တွေကြားမှာသာမက မြန်မာတွေကြားမှလည်း ရှိနေကြောင်း (သို့) ရှိနေနိုင်ကြောင်း သဘောပေါက်မိလာရသည်။ သို့ဖြင့်ပင် ဘာသာပြန်မိခဲ့ခြင်းဟု ဆိုရပါတော့မည်။ အဓိကအားဖြင့်
(က) တရုတ်စီးပွားရေးအကြောင်း အထိုက်အလျှောက် သိထားရန်
(ခ) သူတို့နှင့် ပုံစံတူ အမှားတချို့ ရှောင်လိုက ရှောင်နိုင်ရန် ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
မည်သို့ဆိုစေ မတူညီသော စီးပွားရေးလည်ပတ်ပုံကြားမှာ ဒေါ်လာ ၄၁ ကုဋေကျော်ကတော့ တစ်စချင်း......တစ်စချင်း..........
မစ္စတာချိုင်းနားနှင့် ပတ်သက်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
မစ္စတာချိုင်းနား - မိတ်ဆက်
ဦးရဲထွဋ် ညွှန်းမယ်ဆို ညွှန်းလောက်ပါတယ်။ တေလာက ဦးနေဝင်းအပေါ် အကောင်းမြင်တာတွေရှိတယ်။ စာအုပ်လက်ဆောင်ပေးသွားတဲ့ ပါမောက္ခ ကတော့ "တေလာက အကောင်းမြင်တာများလွန်းတယ်၊ ဖတ်ပြီးရင် အမြင်ပြောပြပါအုံး၊ ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်" မှာထားခဲ့တယ်။
မစ္စတာချိုင်းနား မပြတ်သေးလို့ သေသေချာချာ မကိုင်နိုင်သေးပါဘူး။ ထူထဲ လွန်းတာကြောင့် ဘာသာပြန်ဖို့ထက် ထုတ်နှုတ် ဝေဖန်ဖို့ကောင်းမယ့် စာအုပ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ဦးနေဝင်း ငယ်ဘဝအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ရေရာတဲ့ အထောက်အထား ဘာမှ မရှိခြင်းပဲ။ တစ်မျိုးစီ ဆော်နေကြတယ်။
သူမက ကျွန်တော့် ဖြေရှင်းချက်ကို လက်မခံ။ ယခု ပြဿနာ ပြေလည်သွားလိုလျှင် စက်ရုံနံပါတ်သုံး မြေနေရာအစား အလုပ်သမားဆောင် အဟောင်းများကို ယူရမည်ဟု ဆိုလာသည်။ သူမ ကမ်းလှမ်းချက်က ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်။
''အလုပ်သမားဆောင် အဟောင်းအဆွေးကြီးကို ယူပြီး ကျွန်တော်တို့က ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စတွေ အားလုံး ကျွန်တော်တုိ့နဲ့ မစ္စတာဇူအကြားမှာ ပြောခဲ့၊ သဘောတူခဲ့ပြီးပါပြီ''
''ကောင်းပြီ၊ ဒါဆို ကလေးမူကြိုကျောင်းကိုရော ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ စက်ရုံနံပါတ်နှစ်ရဲ့ နောက်ကျောဘက်မှာ မူကြိုကျောင်း ရှိတယ်''
''ကလေးမူကြိုကျောင်း ဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တို့က ဘီယာချက် မှာလေ။ အဲဒီ ကလေး မူကြိုကျောင်းနဲ့ ဘာသွားလုပ်ရမှာလဲ''
ကလေးမူကြိုကျောင်းကို လက်မခံပြန်တော့ ရေသန့်စင် စက်ရုံဆီ သူမက ဦးတည် သွားပြန်သည်။
''ရေသန့်စင်စက်ဆိုရင်ကော ဘယ်လိုလဲ၊ ဒါကတော့ ရှင်တို့အတွက် အသုံးကျနိုင်ပါတယ်''
ထို့နောက် စကားအခြေအတင် ပြောကြရင်းအချိန်တွေသာကုန်သွားသည် ဆွေးနွေးပွဲက ဘယ်ဆီကိုမှ မရောက်။ ထိုနောက် သူမက အဆီအငေါ်မတည့်လှသော ယုတ္တိတစ်ခု ချပြ လာပြန်သည်။
''ရေနွေးကြမ်း ပန်းကန်လုံးတွေကို ဝယ်ပြီးဆိုရင် ပန်းကန်တွေမှာ အကွဲအအက်တွေ ပါ၊ မပါ စစ်ဆေးရမှာက ရှင်တို့ ဝယ်သူရဲ့ တာဝန်ပဲလေ''
''ဒါက မှန်ပါတယ်၊ အခုဟာက ဝယ်ထားတဲ့ ပန်းကန်တွေ ရောက်မလာတာလေ၊ ပန်းကန်လုံးတွေ ရောက်မလာရင်တော့ ရောင်းသူက အလျော်ပေးရမှာပေါ့''
''ဒါက လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်မက ဆန်ဝယ်ဖို့ထားတဲ့ ငွေနဲ့ ဆီမဝယ်နိုင်ဘူး။ ဒီကိစ္စအတွက် ကျွန်မဆီမှာ ငွေတစ်ပြားမှ မရှိဘူး''
ကျွန်တော်တို့ အခြေအတင် စကားတွေက မုန့်လုံးစက္ကူကပ်၊ ဘာ အဖြေမှလည်း ထွက်မလာ၊ စားပွဲတစ်ဖက်ခြမ်းစီမှာ ထိုင်ရင်း တစ်ယောက် ကို တစ်ယောက်ပဲ ရှုတည်တည်ပဲ ကြည့်နေကြသည်။ (July 27, 2016)
မြို့တော်ဝန်နှင့် တွေ့ဆုံ၊ နောက်ဆုံး ရုပ်မြင်သံကြားသတင်း အရိုက်ခံရသည်အထိ စောင့်လိုက်ရသည့်အချိန်က ဆယ်ရက်သာ ကြာခဲ့သည်။ သာမန် အားဖြင့်ဆိုလျှင် မြို့တော်ဝန်အဆင့်ကို အသာထား လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်နှင့် တွေ့ခွင့်ရဖို့ပင် လပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်နေတတ်သည်။ မြို့တော်ဝန်ကတော့ အပြင်လူတစ်ယောက်အနေဖြင့် တွေ့ခွင့်ပင် မရှိ။ နိုင်ငံတော်ကောင်စီက အမေရိကန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းကိုသာ ကြားနေရပြီး တိုးတက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မတွေ့မြင်ရဟု ဖိအားပေးလာသဖြင့် ဒုတိယမြို့တော်ဝန်က ကျွန်တော်တို့နှင့် အမြန်တွေ့ဆုံပြီး ရုပ်မြင်သံကြားသတင်း ရိုက်ကူးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း နောက်မှ ကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရသည်။ အစိုးရအရာရှိများ နိုင်ငံရေးသဘော အရ ရုတ်တရက် လာရောက်တွေ့ဆုံပြီး မကြာမီ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်သွားခြင်းမျိုးက တရုတ်ပြည်မှာ အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့အတွက် အမြတ်ရလိုက်ပါသည်။ ထိုအရာက Five star ဘီယာချက် စက်ရုံကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခွင့် ရလိုက်ခြင်းပင်။
in Tim Clissold, ကမ်းလက် နေ့စဉ်, ဇင်ဝေသော် - on 5/20/2016 - No comments
နိုင်ငံရေးတကယ်လုပ်တဲ့အခါ အရင်ကရှိခဲ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေး၊ စာပေရေးနဲ နိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေကနေ အနည်းငယ် သွေဖီသွားတတ်ပါတယ်။ ဗားကလပ် ဟာဘယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။
Four lives of Aung San Suu Kyi ကို ပြန်ဖတ်ရင်း စဉ်းစားမိတာပါ။ ဒီသဘောက ကိန်းသေမို့ ဒိတ်အောက်တယ်မရှိဘူး။
ဦးထင်ကျော်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်အသံထွက်၊ လေယူလေသိမ်းက လုံးဝ တန်းဝင်ပါတယ်။
မြန်မာတွေထဲမှာတော့ (ဒေါ်စုရဲ့အင်္ဂလိပ်ကလွဲရင်) မညံ့တဲ့၊ တန်းဝင်ပြီး ကမ္ဘာနားလည်နိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်လို့ထင်ပါတယ်။
တစ်ခုပဲ၊ "Busy" အစား "Tight schedule" လို့ပြောရင် ပိုခန့်မယ်။
Keep up your good work Mr President!
Labels: Tim Clissold, ကမ်းလက် နေ့စဉ်, ဇင်ဝေသော်
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 3/01/2016 - No comments
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့ ဟုတ်ပြီ။ ဒါဆို သမ္မတအထက်ကဆိုတဲ့ စကားကိုလည်း မေ့ထားလို့ မရပြန်ဘူး။ ဒီတော့....
လူတစ်ယောက်က သမ္မတတာဝန်နဲ့ ကြီးလေးလှတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးတာဝန် နှစ်ခုကို ပူးတွဲ တာဝန်ယူထားနိုင်ပါ့မလား။
အခိုက်အတန့်အားဖြင့် ရတယ်ဆိုနိုင်ပေမဲ့ သက်တန်းစေ့ တာဝန်ဆိုရင် ဘယ်လိုလဲ။
ဒေါ်စုကမယ့် ကကြိုးကိုပဲ စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်သဘောပါပဲ။
သမားရိုးကျ မဆန်လှတဲ့ နိုင်ငံရေး။ လူနဲ့ ရာထူး စတာတွေကတော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ နေရာယူနေတော့မယ်။
တရုတ်ပြည်မှာ ဘီးလ်ဂိတ် ဘယ်နှယောက်များ ရှိနေလို့လဲ
in ဇင်ဝေသော်, သူတို့စကား - on 2/29/2016 - No comments
ဂျပန်စီးပွားရေး "အုံး" ကနဲတက်လာတော့ (တကယ်က အမေရိကန် အကူအညီနဲ့) အာရှသတင်းစာအများစုက အမေရိကန်တွေ နောက်ကောက်ကျတော့မယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ ငြိမ်သွားရော။ (ဟန်တင်တန်)
အခု တရုတ်စီးပွားရေး တက်လာတော့လည်း လုပ်ကြပြန်ပြီ။
စီးပွားရေပမာဏ ပိုကြီးလာတာကလွဲလို့ (ဒါက နိုင်ငံကြီး၊ လူများလို့ပါ) ဘယ်တရုတ်က ကမ္ဘာကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်လို တီထွင်မှုတွေ လုပ်နိုင်လို့လဲ။ တရုတ်ပြည်မှာ ဘီးလ်ဂိတ် ဘယ်နှယောက်များ ရှိနေလို့လဲ။ (လီကွမ်းယု)
၃၉ (စ) ပြီ
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 2/28/2016 - No comments
၃၉ (စ) ပြီ။၅၉ မ (စ) သင့်တော့၊ ဆုံးသင့်ပြီ။
အောင်ဆန်းသမီး အငယ်မလေးအတွက် ဖိုးစိန်ဆင့်သား အငယ်ကောင် ရေးတဲ့ကဗျာ (တစ်လလို အမှတ်တရ)
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 2/28/2016 - No comments
သွား သွား မစမ်းကြစမ်းပါနဲ့
No one to fear,
Dare to change။
စင်္ကာပူအတွက် လီကွမ်းယုက Farther Figure
မြန်မာပြည်အတွက် ဒေါ်စုက Mother Figure
ဒန်ပေါက်စားရလို့ ပြောတာ မဟုတ်ရပေါင်။
ကစားရာက ပြေးဖက်ကြတဲ့ ကလေးတွေလိုပဲ။
အညာသားက အညာလေနဲ့ပဲ ပြောတတ်လို့
ဘက်ဆဲလား နိုင်ငံရေး ဘာသာပြန် ဆရာက
in Reader's Digest, ဇင်ဝေသော် - on 2/28/2016 - No comments
ဘယ်လိုမှ ညှိလို့မရကြတော့တဲ့နောက် လင်မယားနှစ်ယောက် ကွာရှင်းဖို့ တရားရုံးရှေ့နေဆီ ရောက်နေသတဲ့။
"စဉ်းစားကြပါအုံးဗျာ၊ လက်ထပ်ထားတာလည်း ဘာမှ မကြာလှသေးဘူး။ တစ်ဦးနဲ့တဦး ညှိကြည့်ကြပါအုံး"
"မရပါဘူးဗျာ၊ ကျနော်တို့ အိမ်ထောင်သက် ရက်ပတ် ၁၂ ပတ်အတွင်းမှာ သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင်တာဆို့လို့ တစ်ခုမှကို မရှိခဲ့ကြပါဘူး"
"ဘယ်ကလာ ၁၂ ပတ်လဲ၊ ရှင် မဟုတ်တာတွေ မပြောစမ်းပါနဲ့။ ၁၃ ပတ်ထဲ ရောက်နေပါပြီ"
(ရီးဒါး ဒိုင်ဂျက်ပဲ။ ဖတ်ဖူးရင် ဆောရီး)
Labels: Reader's Digest, ဇင်ဝေသော်
in ကစ်ဆင်းဂျား, ဇင်ဝေသော် - on 2/28/2016 - No comments
၁။ ဘာသာရေး ယုံကြည်မှုခေတ်
၄။ သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာခေတ်လို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။
ဥရောပ အလယ်ခေတ်မှာ လူထုကို စည်းရုံး၊ မောင်းနှင်၊ ပုံသွင်းဖို့ ဘာသာရေးကို အသုံးချ။
အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းခေတ်မှာ ဒီဗျူဟာ အလုပ်မဖြစ်တော့။ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုက နေရာ ဝင်ယူ။
၁၉ နဲ့ ၂၀ ရာစုမှာ လူထုကို စည်းရုံး၊ မောင်းနှင်၊ ပုံသွင်းဖို့ အမျိုးသားရေးကို အသုံးချ။
၂၀ ရာစုနှောင်းနဲ့ ၂၁ ရာစုမှာ ဒါလည်း သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ကျရှုံးစပြုနေပြီ။
ပစ္စန္တရာဇ်တွေမှာတော့ ကောက်ရိုးမျှင်နဲ့ သံရည်ကြိုဖို့ ကြိုးစားနေဆဲ။
Ref: World Order by Henry Kissinger
တို့နိုင်ငံက အားကျမခံ သင်ပုန်းကြီးမဲ့ပြိုက်တယ်
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 2/27/2016 - No comments
ဘာသာမဲ့များတဲ့နိုင်ငံတွေက စာရိတ္တမြင့်၊ ချမ်းသာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရှိဆိုတော့ တို့နိုင်ငံက အားကျမခံ သင်ပုန်းကြီးမဲ့ပြိုက်တယ်။ မူကြိုပါမက စာနယ်ဇင်းလောကမှာပါ အဲဒီ အရေးခက်ဗျည်းတွေ မရှိသင့်တော့ဘူး။ ငိငိ။
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 2/27/2016 - No comments
ကိုယ့် ဘဝ ဆယ်ဖီကို
in ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 2/26/2016 - No comments
Whenaman gets older,
Small things become big and
big things become small.
an even more bigger role.
Positive thinking and constructive attitude
are vital foraman's survival and growth.
(Zin Wai Thaw)
သေးမွှားတဲ့ကိစ္စတွေက ကြီးလာပြီး ကြ်ီးတာတွေ သေးသွားတယ်။
အတ္တတ္ထစရိယက ပိုလို့ အရေးပါလာခဲ့။
အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သဘောတရားတွေက
သူ့ ရှင်သန်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မရှိမဖြစ်။ ။
ဟဲ... အားချိန်တောင် မရှိဘူး
in ကစ်ဆင်းဂျား, ဇင်ဝေသော် - on 2/26/2016 - No comments
ကစ်ဆင်းဂျားစာအုပ်ရယ်၊ လက်ရှိအမေရိကန်တွေ ဖြစ်ပျက်နေတာရယ်၊ ဟဲ... အားချိန်တောင် မရှိဘူး သက်လား။ ဆရာကစ် ပြောတာတွေ တကယ်ဖြစ်နေတာ။
Dislike ကလွဲရင် အိုကေ။
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 2/26/2016 - No comments
ချစ်လို့ရ။ ဟားဟား လို့ရ။ ဝေါင်းလို့ရ။ ကြေကွဲလို့ရ။ စိတ်တိုလို့လည်းရ တဲ့။
Dislike ကလွဲရင် အိုကေ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ စပြီ။
ဝေါင်း ဝေါင်း ဝေါင်း......
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 2/25/2016 - No comments
အစဉ်အလာအရ ယုံကြည်မှုက တပိုတွဲလပြည့်မနက်ဟာ အေးလွန်းတော့ ဘုရားရှင်တောင် လက်တော်ကို မီးကင်တော်မူရသတဲ့။
ဒီအတွက် ကလေးဘဝ သနပ်ခါးတုံးတွေ စုကြရတာကို မှတ်မိသေးတယ်။
နောက်ပြီး အေးလှတဲ့ရာသီမို့ ပါစကဝမ်းမီးက အားကောင်းလွန်းလို့ အစာကြေခဲတဲ့ ထမင်းနှဲတွေ ထိုးစားကြတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကြီးကလည်း အခိုင်အမာရှိဆဲ။
ကဲ..ထမင်းနှဲထိုးစားကြတာက ဟုတ်ပါပြီ၊ အိမ်အပြင်က အပူချိန် ဘယ်လောက်ရှိနေသလဲ။
ဒေါက်တာထွန်းလွင်ခမျာ အပူချိန်သတိပေး စတေးတပ်တွေ တင်နေရတာနဲ့ ထမင်းနှဲပွဲမှ သတိရခဲ့ရှာလေလား မသိ။
ဘာဖြစ်ဖြစ် တပိုတွဲလပြည့်မှာ ထမင်းနှဲတော့ ထိုးကြရမှာပဲ။
ဟဲဟဲ ပါရာဒိုင်း ရှစ်ဖ်တော့ ဖြစ်နေပြီ။
ဘုရားရှင်ကတော့ "ဒီလပြည့်မှာတော့ လက်တော်မီးကင်ဖို့ မလုပ်ကြပါနဲ့ကွယ် တို့၊ သောက်တော်ရေ အေးအေးလေးတစ်ခွက်သာ ကပ်ပါ"
လို့များ မိန့်တော်မူလေမလား မသိ။
in ဇင်ဝေသော်, တို့တိ တို့တိ - on 2/25/2016 - No comments
မြန်မာပြည်က ပေးကမ်းရက်ရောမှုမှာ အမေရိကန်နဲ့အတူ တစ်မှာ ရှိတယ်ပေါ့။
ဒီလိုတွက်ချက်ရာမှာ အဓိကပါဝင်နေတဲ့အချက်က ဘုန်းကြီး၊ သီလရှင် အရေအတွက်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုတွက်ချက်တယ်ဆိုတာ သိသင့်တာပေါ့။
ဒါကို ပြောသူ၊ သိသူ နည်းတယ်။
မြန်မာဗျည်းတွေက အင်္ဂလိပ်အသံတိုင်းကို ဖလှယ်နိုင်တယ်ပေါ့။ ဘာသာဗေဒကို နားလည်ရင် မဆိုးလှပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာအများစုက Earth လို Girl လို မှာပါတဲ့ (အသံအုပ်) သရသံကို မှန်အောင် အသံမထွက်တတ်ဘူး။ Girl နဲ့ Car သရအသံ မကွဲဘူး။ တချို့က မတူမှန်းကို မသိတာ။
အသံဖွင့်နဲ့ပဲ ဆော်နေကြတယ်။ ဖိုနစ်တစ်မှာ "3:" နဲ့ ပြတယ်။
in ဇင်ဝေသော်, တို့တိ တို့တိ - on 2/24/2016 - No comments
၁။ အဆိုးမြင်သမားက တစ်ဝက်လျော့တဲ့။
၂။ အကောင်းမြင်သမားက တစ်ဝက်ပြည့်တဲ့။ (ဒါက လူသိများတယ်)
၃။ အင်ဂျင်နီယာက ဖန်ခွက်ဟာ ရှိသင့်တာထက် တစ်ဆပိုကြီးနေတယ် တဲ့။
၄။ မြန်မာပြည် တန်ဖိုးမဲ့အိမ်ယာ ကန်ထရိုက်တွေက ဖန်ခွက်လုပ်တဲ့လူတွေနှယ် ညံ့တာ တဲ့။
မြန်မာပြည်က တံတားတွေ လမ်းတွေရဲ့သက်တမ်း
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 2/24/2016 - No comments
တစ်။ နေရာတိုင်းမှာ အိမ်သာတွေ ရှိနေရမယ်။ လူတေကိုလည်း အိမ်သာထဲမှာပဲ အပေါ့အပါးသွားဖို့ ပညာပေးရမယ်။
နှစ်။ လူတွေပြီးရင် လူနဲ့အနီးဆုံး ခွေးတွေ ကြောင်တွေအတွက် အိမ်သာတွေ လုပ်ပေးရမယ်။ သူတို့ကိုလည်း အိမ်သာထဲမှာပဲ သွားဖို့ လေ့ကျင့်ပေးရမယ်။
ဒါဆိုရင် မြန်မာပြည်က တံတားတွေ လမ်းတွေရဲ့သက်တမ်း သိသိသာသာကြီး ရှည်လာလိမ့်မယ်။
in ဇင်ဝေသော်, ရွှေပြည်ကြီးအကြောင်း - on 2/23/2016 - No comments
ဆရာခင်ညွန့် အတွင်းရေးမှူး တစ် ဘဝက ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ ဘိန်းခင်းတွေ၊ မီးရှို့ပြလိုက်တဲ့ ဖမ်းဆီးမိ ဘိန်းတွေ။
ပြသနာက ဖမ်းဆီးမိ ဘိန်းပမာဏက တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုပိုများနေခြင်းပဲ။
ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ အတော်နိုင်တဲ့လူတွေ။
Labels: ဇင်ဝေသော်, ရွှေပြည်ကြီးအကြောင်း
in ဇင်ဝေသော်, သူတို့ဆီကသတင်း - on 2/23/2016 - No comments
တောတောင် မြစ်ချောင်းတွေ သတ်ပစ်လာတဲ့ မြန်မာအစိုးရ စနစ်ဟောင်း။
လာမယ့်အနှစ် ၅၀ နဲ့ ၁၀၀။ အနာဂတ်မျိုးဆက်ကို ရေမငတ်စေပါနဲ့။
in ဇင်ဝေသော် - on 2/19/2016 - No comments
တောထဲရောက်တော့ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ တစ်ယောက်က မူးမေ့ပြီး လဲကျသွားရော။ မျက်လုံးကြီးကပြူး၊ အသက်ရှုသေးသလား မရှုတော့ဘူးလားလည်း မသေချာတော့ဘူး။
ဒါနဲ့ ကျန်တဲ့တစ်ယောက်က စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ အရေးပေါ် လူနာဌာနကို ဖုန်းဆက်ပေါ့...
"ကျနော့် သူငယ်ချင်း အသက်ရှိသေးလားမသိဘူး၊ ကျနော် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ"
"စိတ်အေးအေးထားပါ။ ပထမဆုံး သူ အသက်မရှူတော့တာ တကယ် မှန်ကြောင်း သေချာဖို့လိုပါတယ်"
ဒိုင်း ဒိုင်း ဒိုင်း
"သေချာပါပြီ။ သူ လုံးဝ အသက်မရှူတော့ပါဘူး။ ကျနော် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ပြောပြပါ။ ကျနော် စိတ်တွေ အရမ်းလှုပ်ရှားနေပါတယ်"
in ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 2/18/2016 - No comments
အဖိနှိပ်ခံဘဝ၊ စနစ်ဆိုးဘဝအောက်မှာ အနုပညာတွေ တစ်သီတစ်တန်းကြီး ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့ ရုရှား အနုပညာရှင်တွေထက်
ပွင့်လင်းရာသီမှာ အနုပညာပါပါ တေးဂီတတွေ ဖန်တီးနိုင်တဲ့ အိုင်ရစ်တွေကို ကျနော်ပိုချစ်မိတယ်၊ ပိုလည်း လေးစားမိတယ်။
တော်လှန်ရေးကိုဖွဲ့သီမှ အနုပညာမြောက်တဲ့ ကဗျာ၊ ဂီတဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခုခု မှားနေပါပြီ။
လူနဲ့ စူပီးရီးယား ကွန်ပလက်စ် (နှစ်)
in ဇင်ဝေသော် - on 2/18/2016 - No comments
ဒါကတော့ လူတွေ ရယ်မောတတ်၊ ရယ်မောဖို့ ဖန်တီးတတ်တဲ့ ဟာသတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပါတယ်။
အခြားလူတစ်ယောက် ဘယ်လောက် တော်တယ်၊ ဘယ်လောက် ဖြတ်ထိုးဉာဏ် ရှိတယ် ဆိုတာမျိုးကို လူတွေက သိပ်မရယ်တတ်ကြဘူး။ ရယ်စရာလို့လည်း သိပ်မထင်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ အခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ အလွဲအမှားတွေ၊ အရေးမကြီးလှတဲ့ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှ ကြုံတွေ့ရမှုတွေကိုတော့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ရယ်မောတတ်ကြတယ်။ ဒီရယ်မောမှုမှာ သရော်လိုဟန်တွေ မပါကြပါဘူး၊ ရိုးရိုးပဲ ရယ်မောကြတာပါ။
ဒီအချက်ကို သံသယရှိရင် မြန့်မာပျက်လုံး၊ ကမ္ဘာ့ပျက်လုံးတွေကို လိုက်ကြည့်ပါ။ ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ဟာသတွေထဲမှာ ဇာတ်ကောင်ရဲ့အမှန်ထက် ဇာတ်ကောင်ရဲ့ အမှားအကြောင်းတွေ ပိုများသလို လူတွေကလည်း ဒါကိုပဲ ရယ်မောကြတာပါ။
သူတစ်ပါးရဲ့ အမှားလေးတွေကို ရယ်စရာလို့ ထင်မှတ်နေကြခြင်းဟာ အတွင်းမှာ မသိမသာ ရှိနေတဲ့ လူရဲ့ စူပီးရီးယား ကွန်ပလက်စ်ကြောင့်လို့ သိပ္ပံကဆိုပါတယ်။
လူနဲ့ စူပီးရီးယား ကွန်ပလက်စ် (တစ်)
လူတိုင်းမှာ မသိမသာ စူပီးရီးယား ကွန်ပလက်စ် (ကိုယ်က သူ့ထက် သာတယ်ထင်တဲ့ သဘောထား) ရှိတယ်လို့ သိပ္ပံကဆိုပါတယ်။
ဥပမာ။ ။ ကရုဏာဖြစ်ဖို့က မုဒိတာပွားဖို့ထက် ပိုလွယ်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ လူတစ်ဖက်သားက ကိုယ့်အောက် နိမ့်ပါးနေလို့၊ ကိုယ့်လောက် အဆင်မပြေလို့၊ ကိုယ်က မြင့်နေလို့ပါပဲ။
မုဒိတာကျတော့ တစ်ဖက်သားက ကိုယ့်ထက်သာနေတဲ့အတွက် မသိမသာရှိနေတဲ့ စူပီးရီးယား ကွန်ပလက်စ်နဲ့ သွားပြီး ထိပ်တိုက်တွေ့နေတယ်။
ဒီလိုဆိုလို လက်မခံနိုင်သူတွေ ရှိနိုင်ပေမဲ့ ကရုဏာဖြစ်ဖို့ထက် မုဒိတာပွားဖို့က ပိုခက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ ငြင်းဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါက လူရဲ့ စူပီးရီးယား ကွန်ပလက်စ်ကြောင့်ပါ။
ထိန်းကြောင်းပေးထားတဲ့ နှလုံးသားရှိသူတွေ၊ နှလုံးသားကြီးသူတွေဆီမှာတော့ စူပီးရီးယား ကွန်ပလက်စ် မရှိနိုင်ဘူး။
ရှိရင်တောင် မြင်မကောင်း ရှုမကောင်း ထိုးလိုးထောင်လောင် မဟုတ်နိုင်ဘူး။
(စာအုပ်ကိုင်နေလို့ ဒီလောက်ပဲ ရေးနိုင်တယ်ဗျာ)
ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ပညာအရ "အတိမာန" ဆိုတာနဲ့ "စူပီးရီးယား ကွန်ပလက်စ်" တို့ အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး ညီညွတ်ပါတယ်။
in ဇင်ဝေသော်, တို့တိ တို့တိ - on 2/11/2016 - No comments
ဘဲငန်းကလေးတွေက မျက်စေ့အလင်းပွင့်ရာသစပြီး ဘဲငန်းမကြီးနောက်ကို တဂက်ဂက် မည်သံပေးရင်း မကွေမကွာ လိုက်ကြပါတယ်။ ဒါကို ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုက မိခင်မေတ္တာရဲ့ ဆွဲငင်အားကြောင့်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဒါကို သိပ္ပံက မငြင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တိကျတဲ့ အဖြေကိုတော့ ထပ်ရှာကြည့်တယ်။ ဘဲငန်းလေးတွေ မပေါက်ခင်ကတည်းက သူတို့ဘေးမှာ စက်ရုပ်ကြီးတစ်ခု ချထားပေးတယ်။ သူတို့ မျက်စေ့ ပွင့်ပွင့်ချင်း ပထမဆုံး မြင်တွေ့ရမယ့် အရာက အဲဒီ စက်ရုပ်ကြီးပါ။
သူတို့လမ်းလျောက်တတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်း သူတို့ဟာ စက်ရုပ်ကြီးရဲ့နောက်ကို တကောက်ကော်ပဲ လိုက်နေကြပါသတဲ့။
ဒီမှာ အဖြေတစ်ခု ထပ်ထွက်သွားတယ်။
သတ္တဝါတွေဟာ သူတို့ ပထမဆုံးမြင်တွေ့ရတဲ့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို စံတစ်ခုအနေနဲ သတ်မှတ်ထားပြီး အားကိုးတကြီးလည်း ဖက်တွယ်ထားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ အဖြေပါပဲ။
ကျနော်တို့ သဘောတူသညိဖြစ်စေ မတူသည်ဖြစ်စေ သိပ္ပံဟာ သိပ္ပံအနေနဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာပဲ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
in ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 2/08/2016 - No comments
မြန်မာသင်္ကြန်ရက် ရှည်လှပြီမှတ်တယ်။ တရုတ် နယူးယီးယာက နှစ်ပတ်။
အတုယူစရာလေးက အဲဒီရက်တွေအတွင်း ကျောင်းကိုမလာနိုင်တော့တဲ့ အဘိုး အဖွားတွေဆီ ကိုယ်တော်တွေက သွားကြ၊ လည်ပတ်ကြ၊ ရွတ်ဖတ်မေတ္တာပို့ပေးကြခြင်းပါပဲ။ သူတို့ အလွန်ပျော်ရွှင် ကျေနပ်ကြတယ်။ နာမည်သာပေး၊ ကားအထိ စီစဉ်ပေးစရာ မလိုဘူး၊ ကျောင်းက စီစဉ်ပေးတာ။
ဒီယဉ်ကျေးမှုက မြန်မာပြည်မှာ မရှိဘူး။ ဒီမှာ အပင့် မစောင့်တော့ဘူး။ ကြွလာစေချင်တယ်လို့သာ ဖုန်းသာဆက်၊ ရောက်အောင် လာတယ်။ ။
in ဇင်ဝေသော်, ဟောပြောပွဲ - on 1/23/2016 - No comments
မြန်မာလူငယ်များအတွက် RHC's Seminar in YANGON
Burmese Youth & 21st Century Dimensions
မြန်မာလူငယ် နှင့် ၂၁ ရာစု ဒိုင်မင်းရှင်းများ
1. စာရေးဆရာ ဇင်ဝေသော်
2. ကိုညီညီ (တောင်ကြီး)
10-Feb-2016 ( Wednesday )
03:30pm – 05:30 pm
Myanmar Engineering Society ( MES ), Yangon
Sponsored & Organized By :
RHC Technologies Co., Ltd
Labels: ဇင်ဝေသော်, ဟောပြောပွဲ
in ကမ်းလက်စာပေ - on 1/15/2016 - No comments
ဒီမှာတော့ ထွက်ခဲ့သမျှ ဇင်ဝေသော့် စာအုပ်တွေ အစုံလိုက် ရပါလိမ့်မယ်
ဦးသိန်းစိန် မဆိုးဘူး (အဆဲခံချင် လို့ ရေးတဲ့စာ)
in Politics, ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 1/14/2016 - No comments
သမ္မတအိမ်တော်ကနေ အိမ်ပြန်သွားပြီဆိုတဲ့ ဦးသိန်းစ်ိန်ကို ၂၀၁၂ ခုက ရေးခဲ့တဲ့ စာလေးနဲ့ ညွတ်ညွတ်နူးနူး နှုတ်ဆက်ပါတယ်။
လူ့ သမိုင်းဟာ တစ်မနက်နဲ့ ရေးလို့ မရဘူး။ သံသယ စိတ်နဲ့ ခြေရာကောက်တာတောင် ရက်စက်တယ် ဆိုတာထက် ပျော့ညံ့ တယ် လို့ပဲ သုံးသပ်လို့ရတယ်။ ဒီ ကြားထဲ သဟဇာတ ရှိကောင်းပါ ရဲ့။ ကျနော် ဒီနေ့ အထိ ယုံတယ်။ မယုံလို့လည်း ရတယ်။
သမိုင်းကို အော်ရင်း ဟစ်ရင်း ရေးတာထက် အနာဂတ် သုံး နှစ်ရဲ့ လက်ထဲ ဝ ကွက်အပ်လိုက်မယ် (ဒီထက် လင်းတဲ့ အရောင် မမြင်ဖူးဘူး)။ သူ မခေါ်ရင် ဒေါ်စု လည်း ဝင်ကဖို့ အခက်ပဲ။ သူတို့ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲ နေဟန်တော့ တူရဲ့။ နားလည်ကြပါစေ၊ မတူပါစေနဲ့။
လောင်းရိပ်။ ရှိတယ်၊ ရှိမယ်၊ မရူးသူ ယုံတယ်။ လယ်သမားသား နဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဆိုတာ လက်တွေ့ ဘဝမှာ ခပ်ဝေးဝေး။ သမ္မတ ရဲ့ ဘဝမှာ ဦးသန်းရွှေ ရဲ့ စနက်မကင်းနိုင်ဘူး။ မငြင်းနဲ့၊ ငြင်းသူ မှားတယ်။ မှားမယ်။ လူတိုင်းသိတဲ့ကိစ္စ ကိုပြောသူ အာချောင်တာပဲ။ လုပ်စရာမရှိရင် တစ်ခြားဟာ လုပ်။
လူ့ အခွင့် အရေး?။ မွေးကတည်းက ဒီမိုကရေစီနဲ့ ယဉ်ပါးလာတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ တို့ နိုင်ငံကို လာ မနှိုင်းနဲ့။ တို့ နိုင်ငံက ဆယ်ကျော်သက်၊ လူပျိုပေါက်၊ သူများတွေရဲ့ ပေါ်လစီတွေ လိုက်စရာ မလိုသေးဘူး။ အမေရိကန်တွေ အလိုရှိ ဆိုတဲ့ ဘိန်း အိမ်ရှေ့မင်းသား လောစစ်ဟန် ကို ဘိန်း မပါသရွေ့ ဝင်စေ ထွက်စေ စင်ကာပူက ခွင့်ပေးထားခဲ့တယ်။ ဘယ်သူ ဘာ ပြောပြော။ ရှင်းသလား?၊ လူနဲ့ ငွေသာ လာပါ၊ ဘိန်း မပါ ပါစေနဲ့။ အဲဒါ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ တရားလာမချနဲ့။ ရိပ်သာ မဟုတ်ဘူး။ သူသိ၊ ကျနော်သိ၊ ခင်ဗျားသိ။ ဘိန်း ဆိုတာ အကုသိုလ် အလုပ်။ ပြောမနေနဲ့ အားနေရင် တစ်ခြား ဟာ လုပ်။
အရေးအကြီးဆုးံက ပြည်သူရဲ့ စား၊ ဝတ်၊ နေ။ နေထဲမှာ ကျန်းမာရေး ပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီး ပါတယ်။ ကားဈေး၊ အိမ်ဈေး ပါတယ်။ ပြီးမှ ဖရီးဒမ်း ပေါင်းစုံ။ အဆင့် မကျော် နဲ့။
ရိုဟိန်ဂျာကိစ္စ လက်သည် မပေါ်ဘဲ ဆယ်ယောက် ပျောက် သတဲ့ လား၊ ခင်ဗျားတို့ စိတ်ဝင်စားရင် အရှေ့ အလယ်ပိုင်းမှာ လက်သည် မပေါ်ဘဲ ဘယ်နှယောက် ပြောက်သွားလဲ၊ အဲဒါ အမေရိကန် ခေါင်းဆောင် တဲ့ နိုင်ငံရေး။ ဘင်လာဒင် သေတာသိရုံတော့ မရဘူး ပေါ့။
သတိထား၊ ကျနော်တို့ နိုင်ငံက လူ ပျိုပေါက်။ ပေါက်တတ်ကရ ပေတံ တွေနဲ့ လာတိုင်း ရင် ကွာ နေမှာပဲ။ တိုင်း သူ မမှားဘူး။ အနက် ခရောနစ်ဇင် တော့ မလွတ် ဘူး။ အားနေရင် တစ်ခြား ဟာ လုပ်ရအောင်။
မလိုအပ်တဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ရဲ့ စီးပွားရေး ဘယ်လောက်နှေးသွား သလဲ၊ အိန္ဒိယ ရဲ့ တိုးတက်နှုန်း ဘယ်လောက်နှေးသွား သလဲ။ စင်ကာပူ ဘယ်လောက်ရှေ့ ရောက်နေပြီလဲ။ ဘယ်သူမှ မလုပ်ဘူး၊ အနက် ခရောနစ်ဇစ်တ် တွေ လုပ်တာ။
ရဖျူးဂျီ ခိုလူံခွင့်ရဖို့ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံသူနဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး တို့ တန်ဖိုးကို ကျနော်တို့ ခွဲခြားတတ်တယ်။ လူ့ သမိုင်းဟာ တစ်မနက်နဲ့ ရေးလို့ မရဘူး။ ဒါလည်း ပြောရင် လေကုန်တယ်။ တို့နိုင်ငံထဲ ကမ္ဘာ့ပေတံ တွေ ယူ ယူပြီး တိုင်းနေတာတွေ မကြာ ခဏ တွေ့ ရတယ်။ နေကြပါဦး။ ဘီဘီစီ ယူလာပါစေ၊ ဗွီအိုအေ ယူလာ ပါစေ။ တို့ ရူးချင်ယောင် ဆောင်ထားရအောင်။ ငါး နှစ်လောက်။
ဒါတွေကို အတိအကျ လိုက်မှ ရမယ် ဆိုရင်တော့ လက်ရှိ တို့ နိုင်ငံကို ဘယ်သူ အုပ်ချုပ်နိုင်မလဲ။ ကျေးဇူးပြု ပြီး ပြောကြည့်။ သူတို့ ကို မီဒီယာ က ဘာမှ မဝေဖန်ပါဘူး လို့ ဘယ်သူအာမ ခံ မလဲ။ ကျနော်က ဟဲ ဟဲ ပဲ။ သန်း ၆၀ ဆီက သန်း ၆၀ အသံ၊ ကျနော်တို့ ဘာသံကို နားထောင် မလဲ။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံကို တကယ်ချစ်သလား။ အပြစ်ထက် ဆိုလူးရှင်း ရှာသင့်တယ်။
ဒေါ်စု+ဦးသိန်းစိန် အတွဲထက် ဂိုးပိုရနိုင်မယ့် တိုက်စစ်ရှိရင် ပြောကြည့်ရအောင်။
သေချာတာကတော့ ခင်ဗျားနဲ့ ကျနော် မဟုတ်ဘူး။ သူ နဲ့ ခင်ဗျား တော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ခင်ဗျား သေချာသလား။
ပြောရတာ ခက်တယ်၊ လိုက်လုပ်ရတာက လွယ်တယ် ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးကို ကြည့်မရတဲ့ ရွာသားက ကျုပ်ပြောမယ်၊ ခင် ဗျား လိုက်လုပ်ဆိုပြီး
"မြေကြီးကို ကျင်း တူး"
"အေး တူးပြီးပြီ "
"ဒါဆို ရေ လောင်းထည့် "
"အေး ထည့်ပြီးပြီ "
"ပြီးရင် မှောက်သွန်၊ ခပ် မပစ်နဲ့ " တဲ့။
အခု အထိ အရင်ထက်တော့ သာတုန်းပဲ၊ ပြောရေးဆိုခွင့်မှာ အမေရိကန်တွေလောက် မရတောင် စင်ကာပူ ထက်တော့ သာ သလိုလို။ မယုံရင် ဒီ လာပြီး ဂျာနယ်ထုတ်။ အင်္ဂလိပ်လို ဘလော့ဂ်တင်၊ ဘာမှ မဖြစ်ရင်တော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ပေါ့ ဗျာ။
ဒီမိုကရေစီ အောက်မှာ ခေါင်းစဉ်တွေ အများကြီးဆိုတာ........
ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီမှ ပါဖက် မဖြစ်သေးဘူး ဆိုတာ.....
ဦးသိန်းစိန် နဲ့ ဒေါ်စု ဆိုတာ.....
မြန်မာ နဲ့ အမေရိက၊ ဥရောပဆိုတာ......
ပါးပါနပ်နပ် ကိုင်တွယ်နိုင်ရင် တရုတ်က အဆိုးကြီး မဟု...
ဒီနေ့ မစ္စတာချိုင်းနား ဘာသာပြန်ကို အောင်မြင်စွာ အဆု...
အရင်က ဝတ္ထုဘာသာပြန်ကို ခပ်လွယ်လွယ်ပါလို့ ထင်တားတဲ့ေ...
အောင်ဆန်းသမီး အငယ်မလေးအတွက် ဖိုးစိန်ဆင့်သား အငယ်ကေ...